ओलीलाई हटाउन खोजे स्थिति जटिल हुनुका साथै पार्टी नै फुट्न सक्छ – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
ओलीलाई हटाउन खोजे स्थिति जटिल हुनुका साथै पार्टी नै फुट्न सक्छ
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा नेकपाका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरु बैठक माग गर्दै अलग्गै भेलामा जुटेका बेला स्थायी कमिटीकै एक प्रभावशाली सदस्य सुवास नेम्वाङ भने संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर बैठकको औचित्य र आवश्यकता नरहेको बताएका छन्
नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘किचन क्याबिनेट’ का सदस्य मानिन्छन् । प्रायः हरेक दिन प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने थोरैमध्येका एक नेता उनी अध्यादेशको भने विपक्षमा थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता लिनसमेत सुझाव दिएका थिए ।
चाहे प्रचण्डको राजीनामा माग्नुस, चाहे केपी ओलीको राजीनामा माग्नुस् । त्यसको अर्थ के हुन्छ ? पार्टीको एकता नचाहेको हुन्छ
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्टरुपमा, प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नुभएको छ, म एउटै कक्ष दोर्होयाइ राख्ने व्यक्ति होइन । अर्थात महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना छैन ।
लोकतन्त्रमा उठेका विषयहरुलाई छलफल गर्ने र त्यसलाई उपयुक्त ढंगले निष्कर्षमा र्पुयाउने काम गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर, जहाँसम्म अहिलेको स्थायी कमिटीको सन्दर्भ आएको छ, यो कुरा उठ्दादेखि नै छलफलहरु भइरहेका पनि छन् । स्थायी कमिटीका साथीहरुले औपचारिक अनौपचारिकरुपमा आफ्ना कुराहरु नेतृत्वसमक्ष राखिरहनुभएको छ ।
यही सन्दर्भमा सचिवालयले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय र्गयो । पछिल्लो समय यसबारे छलफल गर्ने क्रममा त्यही सचिवालयले सर्वसम्मतिले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
त्यो निर्णय सर्वसम्मत हो । सचिवालयको बैठक अन्तिमतिर पुग्दा प्रधानमन्त्रीले म एकछिन आराम गर्छु तपाई बैठक चलाउनुस् भनेर कार्यकारी अध्यक्षलाई जिम्मा लगाउनुभयो । त्यसरी कार्यकारी अध्यक्षले बैठक चलाउने प्रचलन छ । त्यही चलनअनुसार उहाँले बैठक निरन्तर गर्नुभयो, त्यही बैठकमा सबैले आ–आफ्ना कुराहरु
यसमा म अलिकति विस्तारमा प्रष्ट गर्न चाहान्छु । हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा हाम्रा विगतका अनुभवहरुलाई ध्यानमा राखेर, जनताले हामीलाई भनेका कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर हामीले धेरै प्रष्ट र नयाँ व्यवस्था गरेका छौं । उदाहरणका लागि– हामीले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसपछि अविश्वास आउँदा त्यो प्रस्ताव फेल भयो भने फेरि एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं ।
जनताले म्याण्डेट नै दिए यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्नुपर्छ । जनता स्थिरता चाहान्छन् । चुनावमा हामीले झण्डै दुई तिहाईको नजिक सजिलो बहुमत प्राप्त र्गयौं । देशले त्यो बहुमतको प्रधानमन्त्री प्राप्त र्गयो । जनता स्थिरता चाहान्छन् र संविधानको व्यवस्था यही हो, जनताको जनादेश पनि यही हो । यस्तो अवस्थामा हामी देशलाई स्थिरता दिन्छौं भनेर बहुमत पाएको पार्टी्भित्रैबाट यसरी प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरामा त मलाई फिटिक्कै विश्वास छैन ।
जहाँसम्म अध्यक्षको कुरा छ, हामी दुईटा बेग्लै पार्टीका रुपमा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनावमा गयौं । चुनावपछि जनताको चाहना पनि यही रहेछ भनेर हामीले पार्टी नै एकतावद्ध र्गयौं । पार्टीलाई एकतावद्ध गर्नुपर्छ भन्ने यिनै दुई नेता केपी आली र प्रचण्ड हुन् । दुवैजनालाई अध्यक्ष बनाएर उहाँहरुको नेतृत्वमा हामीले पार्टी एकता गरेका हौं ।
राजीनामा पनि कसैले भित्र माग्यो भने त छुट्टै कुरा हो । मैलेचाहिँ सुन्न पाएको छैन । मैले भनें नि कसरी हटाउन सकिन्छ ? कसरी राजीनामा माग्न मिल्छ ? यो त पार्टी एकता नै भंग हुने कुरा हो नि । अर्को कुरा पनि म भन्छु, अहिले हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा छौं । यो मानव सभ्यताकै विरुद्धको रोग महामारी हो । कोरोनाको विरुद्धमा विश्व समुदाय एकजुट भएको छ । महाशक्तिहरु ध्वस्त भइरहेका छन् ।
हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म एकजनाको मृत्यु भएको छैन । संक्रमितको संख्या सयभित्रै छ । त्यसमध्ये पनि धेरैजना बाहिरबाट संक्रमित छन् । अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको यो लडाइँको प्रशंसा गरेको छ । यो ठाउँमा हामी उभिएको अवस्था छ । कोरोना विरुद्धको लडाइलाई अझ सशक्त बनाएर यसलाई सफलताको टुंगोमा र्पुयाउनुपर्ने बेलामा यो ढंगले हामी लाग्छौं, यो ढंगले प्रश्न उठाउछौं भनेर मलाई त विश्वास नै छैन ।
उहाँ यसमा प्रष्ट हुनुहुन्छ कि इमान्दारीतापूर्वक यो कानुनको आवश्यकता छ । मैले यो अहिले बेला होइन भनेको छु । नेपालमा एउटा कारणले यी प्रावधान राखियो, तर, यो ठीक छैन भन्ने उहाँको भनाइ छ । तर जुन कुरा उठ्यो, त्यसपछि उहाँले सहजतापूर्वक फिर्ता लिनुभयो । फिर्ता लिएपछि त सिद्धियो नि । प्रतिपक्षहरु चुप लागिसकेका छन् । प्रतिपक्षले यसबारेमा सरकारले फिर्ता लिएर राम्रो र्गयो भनेका छन । हाम्रोभित्र पनि यस्तो आवाज त सिद्धिनुपर्ने हो । मचाहिँ सिद्धिएको ठान्छु ।
तर, मैले बुझ्न नसकेको कुरा के छ भने हामी सबैले एउटा प्रणाली बसाएर चुनाव भयो । जनताले अस्थिरता समाप्त गर्न भनेर ५ वर्षको म्याण्डेट दिए । कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाउँछौ भन्यौं । जनताले त्यसलाई पनि हेरे होलान् । त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने दिशामा अघि बढिरहेको अवस्था छ । अनि फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्टरुपमा प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नु भएको छ, म एउटै कक्षा दोर्होयाइराख्ने व्यक्ति होइन । अर्थात महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना छैन । फेरि प्रधानन्त्री हुने पनि चाहना छैन । यस्तो अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताको चाहना विपरीत हामी किन प्रश्न उठ्ने ढंगले यस्ता काममा लाग्ने ? मलाई त विश्वास छैन । तर, कता–कता चर्चा सुन्छु । तर, त्यता नलाग्दा राम्रो ।
मैले प्रष्ट भनिसकेँ त । सबैजना नेता एकरदुईपटक प्रधानमन्त्री भएका, पटक–पटक अध्यक्ष–महासचिव भएका हाम्रा नेताज्यूहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु बस्नुस्, जनताका सरोकार र चिन्तालाई सम्वोधन गर्नुस्, अगाडि बढ्नुस् । तर, जनताको चाहना विपरीत अस्थिरता सिर्जना गर्न भने कसैले पनि पाउँदैन ।
नेताहरुको यस्ता कुरामा ध्यान जानुपर्छ । पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने जनादेश लिएर प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति, जननिर्वा्चित सांसदहरुबाट निर्वा्चित प्रधानमन्त्रीका बारेमा प्रश्न संसदीय दलमा उठेको त होइन । मलाई त मेरो दलमा उठेको थाहा छैन । यो प्रश्न त पार्टीमा उठ्यो भन्ने मैले चर्चा मात्र सुनेको छु ।